वीरगञ्जमा आज थप एक पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु - Yatra Daily
Home Headline वीरगञ्जमा आज थप एक पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु
वीरगञ्ज ३१ श्रावन । वीरगञ्जमा शनिबारपनि एक जनाले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचाररत एक ४७ पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुने पुरुष वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २६ अठराह सुगौलिका बासिन्दा हुन् । उनमा मृत्यु पश्चात सङ्क्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
शनिबार बिहान अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँनका साथ नाक र मुखबाट रगत निस्केपछि उनलाई नारायणी अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिएको सेमी आइसोलेसनमा भर्न गरिएको थियो ।
आइसोलेसनमा उनको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनलाई आइसीयुमा सिफ्ट गरेर उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपारीटेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाधायले बताए ।
मृत्यु पश्चात उनको स्वाबको नमूना संकलन गरेर पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको हो । उनको शव अहिलेपनि नारायणी अस्पतालमै राखिएको डा. उपाध्यायले बताए । मृतकको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
योसँगै पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २१ पुगेको छ भने सङ्क्रमितको संख्या ११ सय कटेको छ । वीरगञ्जमा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले विगत २१ दिनदेखि निषेधाज्ञा समेत लगाएको छ ।
Previous articleरुसले बनाएको कोरोनाविरुद्ध खोपले काम गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वास
Next articleप्रदेश २ मा हालसम्म कोरोनाबाट ४३ जनाको मृत्यु, पर्सामा सबैभन्दा बढी (विवरण सहित)